Madaxweyne Xasan Sheekh oo markii ugu horeysay ka hadlay arrin la isla dhex-maraayay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo markii ugu horeysay ka hadlay arrin la isla dhex-maraayay (DHAGEYSO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Horn Cable xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay in dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay tahay dhul ka tirsan dalka Itoobiya islamarkaana aanay ogoleyn in nabadeeda la carqaladeeyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in socdaalkii uu ku tagay magaalada Jig-jiga uu ahaa mid uu casuumaad ka helay dowladda Itoobiya iyo ra’iisul wasaaraha dalkaasi, balse aanay suurta-gal noqon lahayn inuu iska booqdo magaaladaasi marti-qaad la’aan.
“Dabcan anigu madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya ayaan ahay, dowladdaas deegaankana waxay ka tirsan tahay dalka Itoobiya, aniga oo dowladda Itoobiya casuumaad ama martiqaad aanan ka haysan dabcan ma tagi karo, marka ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa marti qaadkaasi inoo fidiyay.” ٍSidaas waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yiri:- “Hal mid oo mab da’ah inay cadahay ayaan rabnaa dadka noloshooda cidii carqaladeyneysa cudur-daar malahan, horumarka iyo wanaaga aan halkaasi kusoo aragnay maanta cida dhaheysa waan xureynaynaa ma raacsanin, mana qabno arrintaasi, dadka qaba ra’yi siyaasadeed inay wada-hadal ku cabiraan ayaan qabnaa, dalkaasi xuriyad iyo nolol loo raadinaayo ma arko, horumar weyn oo lixaad leh ayaa deegaankaasi ka muuqdo”.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xilli uu dhawaan socdaal ku tagay magaalada Jig-jiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, kaas oo muran badan ka dhashay, kadib markii sida uu madaxweynuhu sheegay inuu casuumaad ka helay ra’iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya, Hailemariam Desalegn.